Bathi uNtuli uginge indlovu eMtubatuba - Bayede News
Home » Bathi uNtuli uginge indlovu eMtubatuba
Amazondo eNkatha, ukusetshenziswa kwabezindaba nokudlaliswa kwenkece kuthiwa yikho okuthathe iNkatha emsamo kwayibeka emnyango, kwathatha i-ANC kwayibeka emsamo, wahamba uMkhandlu
Imilomo iyavunana ngaphakathi nangaphandle eMkhandlwini uMtubatuba. Iminwe ikhomba lowo oyiMeneja kaMasipala ngeqhingasu eliholele ukuba ukuphatha kushintshe izandla, kusuke ku-Inkatha Freedom Party (IFP) kuye eqenjini eliphikisayo i-African National Congress (ANC). Kuthiwa uMnu uSiyabonga Robson Ntuli wayithunga kusuka kubaholi bakaVukayibambe (African National Congress Youth League), wadlula lapho waya kwamanye amalungu e-IFP ayenganeme ngendlela izinto ezenzeka ngayo, kubandakanya nokuguquguqulwa kwezimeya kusuka kuMnu uQhina Mkhwanazi kuya kuMnu uZungu. Leli labani likaNtuli liweze uMnu uVerus Ncaphalala ogcine eseyiMeya entsha yaseMtubatuba.
Naye uMphemba kuthiwa wenza lokhu nje ubephunga impi ebiza kuye ngqo ebibhedlwa ngaphakathi nangaphandle kukaMasipala, lapho izisebenzi ezithile ezingamuzwa nazimisile zinhlangene nabathile ku-IFP bezihlele ukuba akhonjwe indlela. Emizanweni yokuba axoshwe uNtuli bekuzongenwa ngenxeba kuvezwe izimekemeke zakhe ezingemfihlo azenza nesezibikwe kaningi ngelaboHlanga.
Ozul’azayithole banobufakazi obuphathekayo ekutheni khona lapha kwabezindaba kube khona abesetshenziswa yizinhlangothi zombili ukuba bakhiphe izindaba ezivuna uhlangothi oluthile. Okokugcina nje kwenzeke ngesonto sekusele izinsuku nje ukuba kube nomhlangano lapho abe-IFP bebezophakamisa ukuba uNtuli amiswe. Ngokobufakazi udaba lutshaliwe ukuba kuvele isithombe sokuthi uNtuli ungumashanela oshanela inkohlakalo eMtubatuba nokuyinto azondelwa yona. “Le nto sikwaze ukuyisebenza ukuba iphume ngosuku lwangeSonto ukuze sifake ingcindezi umhlangano wanjalo ngoMsombuluko weNkatha,” kusho umthombo osondelene nodaba nonxuse ukuba ungadalulwa. Lo mthombo ukuvezile ukuthi udaba lukaNtuli luhlukanisa phakathi ubuholi bukazwelonke beNkatha naveze amagama alabo abaxoxa noNtuli ngasese kanye nalabo abangamuzwa kahle.
Abaholi abakubusisi okwenzekile
Kwenzeka konke nje lokhu elaboHlanga lihlangene noNobhala we-ANC KwaZulu-Natal, uMnu uMdumiseni Ntuli, nelibe selimbuza ngalolu daba nosho zisuka nje ukuthi okwenzeke eMtubatuba bekungewona umyalelo weqembu ngakho bazohlala phansi bayibhunge kabanzi ngoba ayibaphethe kahle.
“Ngikhulumile noMphemba we-IFP ngalolu daba ngamchazela ukuthi okwenzeke eMtubatuba bekungewona umyalelo wethu ngakho asihambisani nakho. Okunye ukuthi ubudlelwano bethu ne-IFP obokuthi sinesibophezelo sokuthi akekho oyophazamisa omunye komasipala kodwa njengeqembu eliphikisayo uma kukhona esingeneme ngakho siyokusho lokho,” kuchaza uNobhala kaKhongolose. Ngokuthola kwelaboHlanga i-ANC isijube ilungu layo lesigungu esiphezulu, uNkk uPeggy Neliswa uMaMlambo Nkonyeni, ukuba ayoqoqa lonke ulwazi ngokwenzeke eMtubatuba bese ebuya nombiko.
Ozul’azayithole babe sebeqhubekela kuSihlalo we-IFP KwaZulu-Natal, uMnu uThamsanqa Ntuli, nothe bazokwenza uphenyo ukuze bathole ngala makhansela abo ayisithupha abajikele avota noKhongolose.
“Okokuqala umkhandlu unyakaziswa uma ungenalo uzinzo kuze kushintshe ubuholi kodwa kulokhu sidumele ngoba eMtubatuba selokhu kwafakwa uMlawuli uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu konke kubukeka kusesimeni nentuthuko iyaya kubantu. Ngakho asiqondi ukuthi lesi sinqumo kufinyelelwe kanjani kuso ngoba osopolitiki akumele balwe ekubeni izidingo ziya kubantu futhi kunozinzo,” kusho uNtuli.
Nomphakathi uthinteke kabana
ElaboHlanga lihambele indawo yaseMtuba nayilapho lixoxe nabantu abehlukene mayelana nomphumela walokho okwenziwe ngosopolitiki kweseMeya. Omunye nje okukhulunywe naye kube yinduna uSipho Msane nothe lezi zigemegeme ziphazamisa ngisho izinhlelo zabo njengomkhandlu wesizwe ngoba bafike bahlele intuthuko noMasipala, kuthi kungakapheli nezinyanga iMeya abebehlele nayo isikhishiwe sekufika ozoqala okwakhe okusha.
“Sonke nje nomphakathi sikhathazekile ngalezi zinto ezenzeka eMtubatuba ngoba ziphazamisa nezinhlelo esinazo zentuthuko. Uyabona nje kufika iMeya entsha isitshele ngezinhlelo zayo nathi sijabule bese senza izinhlelo ezizoncika kulokhu iMeya esuke isiqhamuke nakho. Kuyothi kusenjalo kuthiwe isiphumile esikhundleni. Manje kuyefana nokuthi sisebenzela emuva futhi yingakho nendawo yethu ingaqhubekeli phambili sidlulwa omasipala abawomakhelwane. Bekunohlelo lokuthuthukisa idolobha lethu kodwa konke kumile ngoba iMeya eyayifike nalolo hlelo seyakhishwa,” kuchaza iNduna uMsane. Iphethe ngelithi bewumphakathi kabazi okwangempela ukuthi yimuphi lo mdlalo odlalwa eMtubatuba.
Esinye isakhamuzi sona esicele kugodlwe igama laso sithe, okwenzeka eMtubatuba kuyabaphoxa futhi sekubenze babona ukuthi amakhansela ayefana noma ngabe asuke kuliphi iqembu.
“Mina ngibona mtanami kungcono sivele siphathwe izinduna naMakhosi ngoba yibo abantu labo esibika kubo izinkinga zethu. Laba abawosopolitiki awubazi benzani ngaphandle kokuzwa sekuthiwa sebekhiphene ezikhundleni bayabanga. Okubi ababangi ukuletha intuthuko kithi kodwa bazibangela izikhundla esingahlanganise lutho nazo,” kusho lesi sakhamuzi. Esinye sithe ukube kuya ngaso ngabe kwawona uMasipala uvele uvalwe ngoba sekuyacaca ukuthi ababamele abanendaba nabo kodwa bafeza izinhloso zabo.
Ukuqinisekisa ukuthi zonke izinhlangothi ziyaphawula, ElaboHlanga lithinte iMeneja uNtuli kanye neMeya entsha. IMeneja uNtuli iqale ukuthintwa ngesonto eledlule ukuze iphawule kodwa yathi uma ikhuluma nentatheli ocingweni, icela ukuba imibuzo ithunyelwe ngoWhatsApp, kuthe uma isithunyelelwe yashintsha yathi icela kube yi-imeyli nalokho kwenziwa nokushaye isikhathi sokushicilela ngeledlule engabuyile. Ithimba labahleli linqume ukubelulela isikhathi kuze kube yileli sonto. Kuthe uma esephendula ngoLwesithathu wazikhalela ukuthi lolu daba lungaphezulu kwamandla akhe ngakho useyalele ithimba lezokuxhumana kuMasipala nelezomthetho ukuthi kube yilo elibhekana nalo.
“Sengicele abezokuxhumana kanye nabezomthetho ukuba kubeyibo abasingatha lolu daba ngizizwa ngingenawo amandla okuba ngizisingathele mina ngokwami,” kusho uNtuli. Ngenxa yobucayi nobumqoka bemibuzo okubandakanya nezinsolo zemali esetshenzisiwe ekugingeni ubuholi eMtuba. ElaboHlanga lizomnika ithuba lokuba uNtuli aphendule nokuzobikwa ngesonto elizayo.
IMeya uNcaphalala ithintwe kaningi ocingweni kodwa ibingatholakali futhi noWhatsApp ibingawuphenduli.
nguCelani Sikhakhane Oct 9, 2020